Mila mifampitaiza ! | NewsMada
Maro ny zavatra mila harenina eto amin’ity Madagasikara ity. Tsy avy amin’ny alalan’ny famatsiam-bola vahiny na toro-lalana avy any ivelany na fanaovana dika mitovy etsy sy eroa ihany no hahavitana izany fa avy amin’ny fifampitaizana. Malagasy mifampitaiza. Malagasy tsy mifamitaka. Malagasy tsy mifamahan-dalitra. Malagasy, mahatana ny maha Malagasy azy. Miaina ny fombany, mankamamy ny taniny, miteny ny teniny… Ny tahaka ireo no ilaina hanavotana an’i Madagasikara sy ny Malagasy miaina sy mivelona eo aminy.
Fifampitaizana, laharam-pahamehana io. Sady tsy ampy no nihamaivana tanteraka ny fifampitaizana eo amin’ny samy Malagasy. Miala any amin’ny ankohonana ka hatrany amin’ny fiainam-pirenena, tsy nitombina sy tsy niorim-paka intsony ny fifampitaizana fa zary mandeha ho azy ny fiainan’ny Malagasy. Samy maka ho azy !
Lainga ny filazana fa ny rivotra iainana mihitsy no nahatonga io. Tsia, tsia, tsia ! Tsy tokony hatolaka any amin’ny rivotra mitsoka maneran-tany ny fahadisoan’ny Malagasy. Raha nahay nifampitaizana ny tsirairay, tsy ho rakotra fialonana i Madagasikara. Raha niampita tsara ny fifampitaizana eo amin’ny ray aman-dreny sy ny zanaka, tsy hanadino ny tanin-drazany sy ny tanindrazany, tahaka izao, ny Malagasy tsirairay.
Ilaina anefa ny mitandrina fatratra mba tsy hizotra any amin’ny fifampitaizana « tsy izy » ny « raharaha ». Satria efa manjaka be loatra eto amin’ity Nosy ity ny fomba, ny fisainana, ny fiteny, sns, nentin’ilay rivotra avy any ivelany… Noho izany, ilaina ny mahay manavaka tsara ny tena izy sy ny ravindravina nantentina taty aoriana.
Raha vitan’ny Malagasy indray ny mifampitaiza amin’ny maha Malagasy azy, hiverina ny fahendren-drazana. Hiaina amin’ny tena fombany amin’izay ny Malagasy. Hahalala ny hasin’ny tanindrazany sy ny tanin-drazany ny tsirairay. Tsy hisavika sy hanao an-tsavily intsony ny an’ny hafa satria hahalala fa foin-Janahary ho azy i Madagasikara sy ny momba azy manontolo.